Maalin kasta: Liistadayada maalinlaha ah waxay soo bandhigaan wax ka duwan maalin kasta oo bisha ah waxayna had iyo jeer isbedelaan. Cunnooyinka waxaa loo soo diyaariyaa iyada oo diyaar u ah in la cuno waqtiga qadada saaxiibtinimo
Deyrta Menu 2021
Suugada iyo Suugada Hilibka
Suugada caadiga ah iyo suugada hilibka ayaa lagu daray broccoli iyo karootada, iyo buskud.
Kalluunka Parmesan-shiilay ayaa lagu dul saaray sariir bariis bunni bunni ah oo leh khudaarta California, karootada ilmaha iyo buskud.
Koobkii Koonfur Galbeed ee Turkiga
Weelka turkiga koonfur -galbeed oo leh bariis Isbaanish ah iyo galley iyo salsa digir madow. Waxaa lagu adeegaa isku -darka khudradda iyo koob miro ah.
Doogga Doofaarka Dhir-dubay
Caloosha hilibka doofaarka ee la dubay ayaa lagu dhex qooyay baradho macaan oo la shiiday, zucchini, duubka cuntada iyo buskud.
Baastada Digaagga Giriigga
Baasto digaag Giriig ah ayaa lagu siiyay muffin kafee qaxwo.
Hilibka lo'da caajis Joe
Lo'da caajis joe u adeegay on dhan rooti qamadi leh baradho shiidan, karootada la jarjaray iyo koob miro ah
Khudaarta Macaan iyo Dhanaan
Khudaar macaan iyo dhanaan ayaa la siiyay bariis bunni ah oo leh isteroberi la dubay iyo buskud nasiib leh.